Ku Dhis Xiriirro Macaamiil Joogto ah oo leh Nuxur Tayo leh | Martech Zone
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa ogaatay in boqolkiiba 66 ee dabeecadaha wax iibsiga ee internetka waxaa ka mid ah qayb shucuur leh. Macaamiisha ayaa raadinaya muddo dheer, isku xirnaan shucuur ah oo ka baxsan badhamada iibsiga iyo xayeysiisyada bartilmaameedka ah. Waxay rabaan inay dareemaan farxad, dabacsanaan ama farax markii ay khadka tooska ah wax kaga iibsanayaan tafaariiqle. Shirkaduhu waa inay u xuubsiibtaan sameynta xiriiriyadan shucuur leh macaamiisha ayna dhisaan daacadnimo waqti dheer ah oo saameyn ku leh hal iibsi oo keliya.
Iibso badhannada iyo xayeysiisyada la soo jeediyay ee ku saabsan baraha bulshada ee bulshada ayaa bartilmaameedsanaya macaamiisha iyadoo lagu saleynayo macluumaadka shakhsiyeed, sida iibsiga iyo taariikhda dhirta. In kasta oo shirkaduhu ku riixayaan waxyaabaha la xiriira macaamiisha siyaabo kala duwan, hababkani waxay inta badan yareeyaan isdhexgalka macaamil ganacsi (tusaale ahaan, “soo-jeedinta ugu fiican ee xigta” oo ku saleysan waxa aad hadda ka aragtay khadka tooska ah), ee ma ahan xiriir. Suuqyayaashu waxay u baahan yihiin qalab ka wanaagsan ka-hawlgalka joogtada ah. Sheeko xayeysiinta iyo waxyaabaha ka kooban shakhsiyadeed ayaa awood u leh inay ku guuleystaan ​​xiriiro waara iyaga oo awood u siinaya khibradaha kala duwan
Kordhinta iibsashada internetka iyo mobilada ayaa yareeyay munaasabadaha isku xirnaanta aadanaha. Bixinta macaamilada internetka badanaa waxay ka muuqdaan meeleyn aan dhammaad lahayn, ku celcelin ah oo ku saabsan boggaga macmiilku jecel yahay markay karti u siiyaan, taas oo sii kordhinaysa cuncunka ka dhalan kara. Wax kastoo shakhsi ahaaneed oo ka dhaca khadka tooska ah wuxuu u eg yahay inuu ku sii jiro hal kanaal (ie. Suuqgeynta emaylka) iyada oo shirkaduhu ay ku dhibtoonayaan inay gaaraan ganacsi "aan lahayn" ganacsi marka isla macaamiilku ka gudbo kanaallada.
Si ay u jirto rajo kasta oo lagu gaari karo heer sare omnichannel, waxaa lagama maarmaan ah in istiraatiijiyad calaamadeysan la beddelo si loo bixiyo aragti hal ah oo ku saabsan waxyaabaha iyo wax soo saarka alaabada guud ahaan taabashada kuwaas oo u sheegi kara sheeko joogto ah mar kasta oo macaamilku la macaamilo calaamadda.
Istaraatijiyadaha Shakhsi ahaaneed
Markay tahay la-shaqsiyeynta, inaad dib uga fikirto waxyaabaha suuqgeynta ah ee kaafilada oo dhan waa tillaabada koowaad. Suuqyayaashu waxay u baahan yihiin inay go'aamiyaan qiimaha iyo mudnaanta dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah isla markaana ay wax ka beddelaan nuxurka iyo sheekooyinka sheekooyinka si waafaqsan. Waxa ay macaamiishaadu qiimeeyaan waa inay si weyn saameyn ugu yeeshaan waxyaabaha aad ka riixeyso dhammaan kanaallada suuqgeynta.
Tusaale ahaan, haddii bartilmaameedkaaga dhagaystayaashu qiimeeyaan isbeddellada iyo moodada, waxaa muhiim ah in waxyaabaha suuqgeyntaadu ka kooban tahay (laga soo qaado sharraxaadda alaabada illaa sawirrada dhabta ah) ay xoogga saaraan astaamaha horay loogu sii gudbiyo ee badeecada. Tani waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa inaad diirada saareyso wadiiqooyinka qaarkood kuwa kale. Kooxdan ayaa laga yaabaa inay qiimeeyaan saamileyaasha warbaahinta bulshada, tusaale ahaan, marka la isu geeyo waxyaabaha adeegsada warbaahinta bulshada ee adeegsada waxay ka caawin kartaa sumaddan inay kobciso xiriir badan oo xagga shucuurta ah.
Mustaqbalka sheeko xariirta waxay ku jirtaa isku darka waxyaabaha ku jira kanaalka ganacsiga. Shirkadaha sheega sheeko-dheer waxay sameyn karaan wax ka badan dhiirrigelinta wax iibsashada. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelan karaan fikradaha dadweynaha waxayna horumarin karaan xiriiro iyagoo kicinaya shucuur. U sheegida sheekooyinka saxda ah iyadoo la adeegsanayo istiraatiijiyad adeegsi ah waxay u adeegi kartaa isku xirnaanta aadanaha ee aadka loogu baahan yahay ee u dhexeeya nooc iyo macaamiisheeda.
Sidee EnterWorks awood ugu yeeshaa xeeladahaas
EnterWorks waxay u oggolaaneysaa dukaamada iyo calaamadaha inay kaxeeyaan iibka iyo kobaca farqiga iyadoo la adeegsanayo, waayo-aragnimo kala duwan iyada oo loo marayo hal aragti oo ku saabsan alaab-qeybiyeyaasha, la-hawlgalayaasha, macaamiisha, iyo suuqyada.
Mashruucu wuxuu ku shaqeeyaa isku-darka macluumaadka badeecadaha ee ka imanaya gudaha iyo iibiyeyaasha (waraaqaha, bogagga alaab-qeybiyaha, keydka macluumaadka dhammaadka dambe, sawirrada ama fiidiyowyada) oo leh nidaam dhexe oo nadiifiya oo hubiya dhammaan xogta. Kaydinta xogta sare ee macallimiintu waxay awood u siineysaa abuuritaanka wada-jir ah oo loo isticmaali karo dhammaan kanaallada suuq-geynta dijitaalka ah iyo jireed ee laga helo degellada websaydhada iyo barnaamijyada moobiilka illaa buugga iyo waraaqaha daabacan
Si gaar ah si gaar ah, maareynta xogta EnterWorks 'waxaa ka mid ah:
Maareynta Macluumaadka Master: Isku duub aagagga wax soo saarka, macaamilka, sumadda, goobta, iyo aaladda si aad ugu suurtageliso ololeyaashaada inaad gaarsiiso bartilmaameedyo dhinacyo badan leh.
Maareynta Macluumaadka Badeecada: Abuur oo kobciso xogta badeecada iyo nuxurka iyadoo la raacayo goobaha jir ahaaneed iyo barta taabashada dhijitaalka ah ee loogu talagalay gudbinta waxyaabaha aan xadka lahayn.
Qaabeynta Xogta Dynamic: Isku waafaji ama dheeree xogta iyo moodellada tusmada si loo kala duwo waxyaabaha la soo bandhigo iyadoo qaabka ganacsigu isu beddelayo qaybo cusub iyo suuqyo
Maareynta xogta iyo waxyaabaha ku jira ayaa muhiim u ah sameynta xiriirka lala yeelanayo macaamiisha. Laakiin si sax ah loo sameeyo, ganacsiyada waa inay maalgashi ku sameeyaan barxad casri ah oo isku dheellitireysa xogta iyo waxyaabaha ka kooban dhammaan dhufto ee kala duwan si ay si dhab ah saameyn ugu yeeshaan dhagaystayaasha bartilmaameedka ah. Markay magacyadu awood u leeyihiin inay u sheegaan sheeko shirkadeed oo joogto ah oo kicisa dareenka saxda ah ee macaamiisha, waxay dhisi doonaan isku xirnaan qoto dheer waxayna ugu dambeyntii kobcin doonaan daacadnimo muddada dheer ah.
Tags: Content Suuqqaabaynta xogta firfircoonshaqooyinkamaaraynta xogta xogtaxeelado shaqsiyeedka kooban shakhsiPimmaaraynta macluumaadka badeecadahawlgal joogto ah
gShift: Daraasad Kiis ah oo SaaS Ku Saabsan Dhaqanka Ugu Fiican